Ilungiselela BlackBerry — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Kusho ukuthini "Yenza ngokwezifiso BlackBerry"?
↓ Iya kumanani kanye nencazelo yamasevisi
I-Smartphones BlackBerry — amadivaysi amahle angenza okuningi. Noma kunjalo, ukuqala ukusebenza nge-BlackBerry smartphone, ngokuvamile udinga ukwenza kuqala izilungiselelo zokuqala: uvule kumhlinzeki wesevisi noma usebenzise i-BlackBerry ID kanye ne-BBM, faka uhlelo lokusebenza oluzinzile nokusekela ulimi lwesiRussia, isethi yezinhlelo, setha i-imeyili.
Kungakanani ukubeka i-BlackBerry?
Naphezu kokuba khona kwi-inthanethi yamaforamu amaningi ngolwazi lokubeka BlackBerry, sikhuthaza ukuthi usebenzise amasevisi wethu. Kungani Kunezizathu eziningana:
Akulula kakhulu. I-BlackBerry ingcono "ingenasisekelo", futhi, kaningi, i-smartphone ngayinye iziphatha ngokungenasiphelo.
Ukumisa iBlackBerry kuthatha isikhathi, futhi uma ungakwenzi lokhu — ngaphambili, uzochitha izinsuku eziningana ucwaninga umbuzo oyidingayo, noma ngabe unolwazi oluthile nolwazi.
Uma kwenzeka uzimela ngokuzimela nge-BlackBerry, unomthwalo wemfanelo ngokwakho. Ngokuvamile, ngemva kokusebenza okunjalo kwe-amateur, siphatha "okunzima", okungukuthi, okungasebenzi, amadivaysi.
Sizoyilungisa kahle. Vumela iBlackBerry yakho kochwepheshe, — sinikeza isiqinisekiso emsebenzini owenziwe.
Sinikeza ngezinsiza eziningi ezahlukene hhayi kuphela ukubeka BlackBerry, kodwa futhi ukulungisa BlackBerry kuwo wonke amamodeli. Uma ngabe idivayisi ingavali, izinkinobho ziyeka ukusebenza, uma uphonsa ifoni emanzini noma ushaya isikrini, noma unezinye izinkinga zehadiwe ezidinga ukulungiswa — sizokwenza konke okusemandleni ethu ukubuyisela ukusebenza okugcwele efonini yakho. Incazelo nezintengo zokukhanda kwazo zonke izinhlobo ongazibona ekhasini Ukulungisa ne-BlackBerry .
Incazelo yamasevisi wokubeka BlackBerry namanani
Izindleko zokubeka i-BlackBerry incike kunani lezinsizakalo ozidingayo. Ngezansi ungathola uhlu lwamasevisi namanani.
Backup ukuze BlackBerry
Ulwazi on BlackBerry — yakho futhi ayigugu elingenakuqhathaniswa. Thina kuzokusiza ukudala ikhophi yokugada ingozi yonke idatha yomuntu siqu, kuhlanganise oxhumana nabo (ibhuku lamakheli), ikhalenda, amanothi, imisebenzi, SMS-imiyalezo, kanye E-mail.